Coca-Cola Tet 2014 Kuputira Zvokunwa Zvakapfava - Dhizaini magazini
Kuputira Zvokunwa Zvakapfava
Svondo 29 Chivabvu 2022
Kuputira Zvokunwa Zvakapfava Kugadzira akatevedzana Coca-Cola makani ayo anoparadzira mamirioni eTết anoshuva nyika yose. Isu takashandisa Coca-cola's Tết chiratidzo (iyo Swallow bird) sechinhu kugadzira zvishuwo izvi. Kune yega yega inogona, mazana emahara akaidhonza ruoko akavezwa uye akarongeka zvakanyatsotenderedza kutenderedza tsika, iyo pamwe inouka nhevedzano yezvinoreva Vietnamese zvido. "An", zvinoreva Runyararo. "Tài" zvinoreva Kubudirira, "Lộc" zvinoreva Prosperity. Aya mazwi anoshandurwa zvakanyanya muvhezheni, uye netsika vakashongedza Tết kushongedza.
Zita rechirongwa : Coca-Cola Tet 2014, Vagadziri zita : Rice Creative, Izita remutengi : Rice Creative.
Kuputira Zvokunwa Zvakapfava Rice Creative Coca-Cola Tet 2014